OTU ESI EDE USORO DISK - WINDOWS - 2019
Otu esi ede usoro disk
Dị ka ọnụ ọgụgụ dị iche iche na-egosi, ọ bụghị ndị ọrụ niile maara otú e si arụ ọrụ a kapịrị ọnụ. Nsogbu kachasị adaba ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpụpụta C ụgbọala na Windows 7, 8 ma ọ bụ Windows 10, ya bụ. ike mbanye usoro.
Na ntuziaka a, anyị ga-ekwu banyere otu esi eme nke a, n'eziokwu, otu ihe dị mfe - ịkọ C mbanye (ma ọ bụ kama nke ahụ, ụgbọala nke arụnyere Windows), na ọkpụkpọ ọ bụla ọzọ. Ọfọn, m ga-amalite site na mfe. (Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịhazi draịvụ ike na FAT32, Windows na-edekwa na olu dị oke maka faịlụ faịlụ, lee isiokwu a). O nwekwara ike ịba uru: Gini bụ ọdịiche dị n'etiti nhazi ngwa ngwa na Windows?
Ịkpụpụta diski ike ma ọ bụ nkebi na Windows
Iji gbanwee diski ma ọ bụ akụkụ ya ezi uche na Windows 7, 8 ma ọ bụ Windows 10 (na-ekwu okwu, ụgbọala D), meghee onye nyocha (ma ọ bụ "Kọmputa m"), pịa aka na bọtịnụ ma họrọ "Hazie".
Mgbe nke ahụ gasịrị, dee kpọmkwem, ọ bụrụ na achọrọ, olu olu, usoro faịlụ (ọ bụ ezie na ọ ka mma ịhapụ NTFS ebe a) na usoro nhazi (ọ bụ ihe ezi uche dị na ịhapụ "Nhazi ngwa ngwa"). Pịa "Malite" ma chere ruo mgbe a ga-akọwacha diski. Mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na diski ike buru ibu, ọ nwere ike iwe ogologo oge, ọbụnakwa ị nwere ike kpebie na kọmputa ahụ gwụla. Na pasent 95% nke a abụghị ikpe, echere naanị.
Ụzọ ọzọ iji sụgharịa diski ike na-abụghị usoro bụ ime ya na iwu usoro na usoro iwu na-agba ọsọ dịka onye nchịkwa. N'ikpeazụ, iwu nke na-eweta nhazi ngwa ngwa ngwa na NTFS ga-ele anya dị ka nke a:
usoro / FS: NTFS D: / q
Ebe D: bụ akwụkwọ nke disk ahụ.
Otu esi achikota C na Windows 7, 8 na Windows 10
N'ozuzu, ntuziaka a bara uru maka nsụgharị nke Windows. Ya mere, ọ bụrụ na ị gbalịrị ịhazi usoro diski ike na Windows 7 ma ọ bụ 8, ị ga-ahụ ozi na:
Ịnweghi ike ịkpụ olu a. Ọ na-agụnye ụdị mbipute Windows ugbu a. Ịhazi olu a nwere ike ime ka kọmputa kwụsị ọrụ. (Windows 8 na 8.1)
A na-eji disk a. A na-eji diski na-eji ihe omume ma ọ bụ usoro ọzọ eme ihe. Hazie ya? Na mgbe ịpịrị "Ee" - ozi "Windows enweghị ike ịkpụzi diski a. Gbanyụọ mmemme ndị ọzọ niile na-eji disk a, hụ na windo anaghị egosiputa ya, ma gbalịa ọzọ.
Ihe na - eme na - akọwapụta ngwa ngwa - Windows enweghị ike ịkpụpụta diski nke ọ dị. Ọzọkwa, ọ bụrụgodị na arụnyere sistemụ na diski D ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ, otu ihe ahụ, akụkụ nke mbụ (ya bụ, ụgbọala C) ga-enwe faịlụ ndị achọrọ maka ịkwado sistemụ arụmọrụ, n'ihi na mgbe ịgbanyere kọmputa ahụ, BIOS ga-ebu ụzọ malite ibugharị si n'ebe ahụ.
Ya mere, ịkpụpụta C kaadị, ị ga-echeta na ihe a na-egosi ntinye nke Windows (ma ọ bụ OS ọzọ) ma ọ bụ, ọ bụrụ na arụnyere Windows na nkewa dị iche, usoro ịhazi boot nke OS, ma ọ bụrụ na ị bụghị oke onye nwere ahụmahụ (ma o doro anya, nke a bụ ya, ebe ọ bụ na ị nọ ebe a), Agaghị m akwado ikwu ya.
Ọ bụrụ na ị kwenyesiri ike na ihe ị na-eme, gaa n'ihu. Iji sụgharịa C ụgbọala ma ọ bụ nkewa Windows, ị ga-achọ ịba site na mgbasa ozi ndị ọzọ:
Bootable Windows ma ọ bụ Linux flash mbanye, buut disk.
Mgbasa ozi ọ bụla ọzọ - LiveCD, CD nke Hiren, Bart PE na ndị ọzọ.
E nwekwara ihe ngwọta pụrụ iche, dị ka Acronis Disk Director, Paragon Partition Magic or Manager na ndị ọzọ. Ma anyị agaghị atụle ha: na mbụ, a na-akwụ ụgwọ ngwaahịa ndị a, na nke abụọ, maka ebumnuche nke nhazi ngwa ngwa, ha adịghị mkpa.
Nhazi site na iji ngwa mkpofu ma ọ bụ diski Windows 7 na 8
Iji sistemụ usoro diski n'ụzọ dị otú a, bugharịa site na mgbasa ozi kwesịrị ekwesị ma họrọ "Ngwaọrụ zuru ezu" na nhazi nke ịhọrọ ụdị nwụnye. Ihe ọzọ ị ga - ahụ ga - abụ nhọrọ nke nkebi iji wụnye.
Ọ bụrụ na ị pịnye njikọ "Njikwa Ntọala" ahụ, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịnwe ụzọ ma gbanwee usoro nke akụkụ ya. Enwere ike ịchọta nkọwa gbasara nke a n'isiokwu "Otu esi kewaa diski mgbe ị wụnye Windows."
Ụzọ ọzọ bụ ịpịgharịa Shift + F10 n'oge ọ bụla echichi, akara iwu ahụ ga-emeghe. Site na nke ị nwere ike ịmepụta nhazi (esi eme ya, e dere ya n'elu). N'ebe a, ị ga-eburu n'uche na n'ime usoro mmemme ahụ, akwụkwọ edemede C nwere ike ịdị iche, iji chọpụta ya, buru ụzọ jiri iwu:
wmic ezi uche na-enweta ngwaọrụ, volumename, nkọwa
Na, iji dokwuo anya ma ihe ejikọtara - iwu DIR D:, ebe D: bụ akwụkwọ edemede. (Site na iwu a ị ga-ahụ ọdịnaya nke nchekwa na diski).
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike itinye usoro a na mpaghara ahụ chọrọ.
Otu esi ede usoro diski n'iji ndu
Ịkpụpụta diski ike site na iji ụdị dị iche iche nke LiveCD apụtaghị iche na nhazi naanị na Windows. Ebe ọ bụ na, mgbe ị na-ebudata na LiveCD, ihe niile dị mkpa dị na RAM nke kọmputa ahụ, ị ​​nwere ike iji ụdị BartPE dị iche iche ịhazi usoro diski ike site na Explorer. Na, dị ka nhọrọ ndị a kọchara, jiri usoro iwu na iwu akara.
E nwere nuances nhazi ọzọ, mana m ga-akọwa ha n'otu n'ime isiokwu ndị na-esonụ. Na iji mee ka onye ọrụ novice mara otú e si akpọ C ụgbọala nke isiokwu a, echere m na ọ ga-ezu. Ọ bụrụ na ọ bụla - jụọ ajụjụ n'ime ihe ndị ahụ.